Lalàna & Zo: Vavolombelon’i Jehovah any Rwanda | JW.ORG
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Yorobà
Topy Maso An’i Rwanda
Efa nisy Vavolombelon’i Jehovah tany Rwanda nanomboka tamin’ny 1970. Nekena ho ara-dalàna izy ireo tamin’ny 1992, ary nohamafisin’ny fanjakana izany tamin’ny 2002. Tsy manao politika ny Vavolombelona, ary maro no mahafantatra an’izany. Afaka mitory sy mivory hoatran’ny Vavolombelona maneran-tany izy ireo. Tsy nandray anjara tamin’ilay fandripahana foko nahatsiravina tamin’ny 1994 ny Vavolombelona. Nanao vivery ny ainy mihitsy aza izy ireo mba hiarovana ny hafa. Avakavahan’ny olona sasany anefa izy ireo izao satria tsy manao politika.
Roahin’ny talen’ny sekoly sasany ny mpianatra Vavolombelona, satria tsy mety mandray anjara amin’ny fombafomba mampiseho fitiavan-tanindrazana sy amin’ny vavaka iraisam-pinoana atao any. * Teren’ny fanjakana koa ny mpampianatra hanao seminera, ary tafiditra amin’izany ny manao hiram-pirenena sy miofana ho miaramila. An-jatony àry ny Vavolombelona mpampianatra very asa. Nilaza ny fanjakana any Rwanda tamin’ny 2010, fa tsy maintsy manao fianianana eo anoloan’ny sainam-pirenena ny mpiasam-panjakana rehetra. Maro àry ny mpiasam-panjakana Vavolombelon’i Jehovah no very asa.
Faly foana ireo Vavolombelon’i Jehovah any Rwanda satria afaka mivory sy mitory ihany, na dia eo aza ireo olana ireo. Manantena anefa izy ireo fa any aoriana any, dia ho takatry ny manam-pahefana hoe tsy hanakorontana ny filaminam-bahoaka raha tsy manao politika ny Vavolombelona.
^ feh. 3 Mihevitra ny Vavolombelon’i Jehovah fa toy ny fivavahana ny fombafomba mampiseho fitiavan-tanindrazana. Mifanohitra amin’ny didin’Andriamanitra koa izany satria izy irery ihany no tokony hivavahana. Tsy manao ireny fombafomba ireny àry izy ireo, nefa manaja kosa ny zon’ny hafa hanao izany.